Kuratidza 1-4 ye 13 migumisiro
Nhema Garlic wabvisa
Kukwegura chinhu chatinoita tese asi tinonzwisisa zvishoma kwazvo nezvazvo. Uropi hwako hunoita shanduko paunenge uchikwegura izvo zvinogona kuve nemhedzisiro pane yako ndangariro kana hunyanzvi hwekufunga Zviri nyore kuita runyorwa rwese shanduko dzinouya nezera - ndangariro kurasikirwa, makwinya, kurasikirwa kwemhasuru.
Kupisa (anti-kukweguru) inogona kuve nyaya yakaoma kutaura: hondo iri kurwiwa manje pamusoro pechinoreva izwi mukutsvagira nemushonga, uye sechinhu chechigadzirwa muzvigadzirwa zvinesimba uye zvinowanzo nyengedza.
Kurwisa (Anti-kuchembera) ikozvino kune zvakati wandei zvakasiyana kureva uye kutaurirana.
-Munharaunda yesainzi anti-kukweguru (antiaging) tsvakiridzo inoreva chete kunonoka, kudzivirira, kana kudzoreredza kuchembera. Ipo ramangwana rakatarisa zvakanyanya kuvimbisa, parizvino hapana hunyanzvi hwekuvhenekesa uye huripo hwehutano hunononoka kana kudzoreredza kuchembera muvanhu.
-Munharaunda yakakura yemabhizinesi - inosanganisira yakawanda yekunyepedzera kana yekunyepedzera kufambidzana - kurwisa kukwegura chiratidzo chakakosha uye nzira yakaratidzwa yekuwedzera kutengesa.
Mune maitiro aya, zvigadzirwa zvinopesana nekukwegura zvava kuwedzera uye zvakakurumbira. Anti Anti poda application inosanganisira:
-Skin chengetedza zvigadzirwa
-Nutano hwehutano zvigadzirwa
Dementia inova yakajairika nezera. About 3% yevanhu vari pakati pemakore 65 ne74, 19% pakati pe75 ne84, uye vangangoita hafu yeavo vanopfuura makore makumi masere nemashanu ekuberekwa vane dementia. hosha dzechirwere cheAlzheimer, chirwere checebrovascular, chirwere cheParkinson uye chirwere chaLou Gehrig.
Kukwegura ndiyo njodzi huru yechirwere cheAlzheimer. Alzheimer's mhando ye dementia inokonzeresa matambudziko nekurangarira, kufunga uye maitiro. Zviratidzo zveAlzheimer zvinowanzo kukura zvishoma nezvishoma uye zvichitowedzera nekufamba kwenguva, zvichive zvakakura zvakakwana kuti zvipindire nemabasa ezuva nezuva. "Tinoziva kuti zera ndiro chinhu chikuru chinokonzera chirwere cheAlzheimer, saka hazvishamise kuti takawana chinodhaka chakanangana nekukwegura,"
FDA yakabvumidzawo seNamzaric, musanganiswa weNamenda (memantine) uye Aricept, kurapwa kwehuremu kusvika kune chirwere chechirwere cheAlzheimer.
Namendais (memantine) anotenda kushanda nekugadzirisa glutamate, anokosha brain kemikari. Kana zvikagadzirwa zvakawandisa, glutamate inogona kutungamira kuuropi hweseru. Nekuti NMDA vanopesana vanoshanda zvakasiyana kubva kune cholinesterase inhibitors, iyo mhando mbiri dzezvinodhaka dzinogona kuve dzakarongedzwa musanganiswa.
Alfa-lipoic acid inoita sekubatsira kudzivirira mamwe marudzi ekukuvara kwesero mumuviri, uye zvakare inodzosera Vitamini senge vitamini E nevhitamini C. Pane humbowo hwekuti alpha-lipoic acid inogona kuvandudza basa uye kufambiswa kwemauroni mune chirwere cheshuga.
Kurasikirwa nendangariro kunetsekana kunoitika pakati pevakuru vakuru .. Zvinotendwa kuti kukuvadzwa kubva kune oxidative kusagadzikana kunotamba chikamu chakakosha mukukanganwa kurangarira.
Nekuti alpha-lipoic acid ine simba antioxidant, zvidzidzo zvakaongorora kugona kwayo kudzora kufambira mberi kwezvinetso zvinoratidzirwa nekukanganwa kwendangariro, senge chirwere cheAlzheimer
Mbiriso, chiropa, itsvo, sipinashi, broccoli, uye mbatatisi zvinhu zvakanaka zvinopa alpha-lipoic acid.
Nekushandisa makomisheni aya senheyo, vaongorori vakagadzira vatatu vaAlzheimer's drug drug vanodaidzwa kuti CMS121, CAD31, uye J147; ivo zvakare vakashandisa fisetin uye curcumin zvakananga. Chikwata chakaratidza kuti shanu dzese dzemakomputa idzi dzakaderedza biomarker yekukwegura, yakawedzera nzira yepakati yemakonzo nenhunzi, uye ndokudzora zviratidzo zvehuropi.
Kuchembera ndiko kukanganisirwa kwenguva pane muviri wemunhu, uye kunoitika pane akawanda mazinga:
-Cellular kuchembera. Masero ezera zvichienderana nehuwandu hwenguva dzavakadzokorora. Sero rinogona kudzokorora kanosvika makumi mashanu nguva iyo genetic yezvinhu isati yagona kuteedzwa nenzira kwayo, izvo zvinokonzerwa nekufupiswa telomeres. Kukuvadza kwakanyanya kunoitwa kumasero nema free radicals uye zvimwe zvinhu, mamwe maseru anofanirwa kutevedzera.
-Hormonal kukwegura. Mahormoni anoita chinhu chikuru mukukwegura, kunyanya panguva yekukura kwemucheche uye kukura kwekuyaruka. Mahormone mazinga anochinja kuburikidza nehupenyu. Kukura kunounza acne uye hombe pores. Patinenge tichikura, kushanduka kwehomoni kunotungamira kune ganda rakaoma uye kuenda kumwedzi.
-Kwakakanganiswa kukuvara. Kukuvara kwakawedzerwa kwese kuri kunze. Kutaurwa nehupfu, zuva, zvikafu zvinokuvadza, kusvibiswa, uye utsi zvinotora muviri. Nekufamba kwenguva, izvi zvinhu zvekunze zvinogona kukonzera kukuvara kwetsitsi uye muviri unowira shure mukugona kwayo kuchengetedza nekugadzirisa maseru, tishu, uye nhengo.
-Metabolic kuchembera. Sezvo iwe uchienderera nezvezuva rako, masero ako anogara achichinja chikafu kuva simba, iyo inogadzira byproducts inogona kukuvadza. Maitiro ekugadzirisa uye kugadzira simba anoguma nekukuvara kwemuviri nekufamba kwenguva. Vamwe vanotenda kuti kudzikisa maitiro e metabolic kuburikidza nemaitiro akadai sekudzora calorie kunogona kunonoka kukwegura muvanhu.
Kazhinji hunhu hunhu hweAlzheimer's hunosanganisira kusarara, kudzungaira, kushushikana, kunetseka, kunetswa, kusagadzikana, uye kuora mwoyo. Masayendisiti ari kudzidza kuti sei zviratidzo izvi zvichiitika uye ari kudzidza kurapwa nyowani-zvinodhaka uye nondrug-kuzvibata.